Manamboara tranom-borona anao | Famoronana asa tanana miaraka amin'ny ankizy
Torohevitra hananganana trano fonenanao manokana ho an'ny ain'ny vorona eo an-toerana
Topazo maso miaraka amin'ny ankizy ny mpamahana vorona
Tranom-borona namboarin-tena Tsy vatosoa kely fotsiny ao an-jaridaina, fa toeram-panangonana ihany koa ho an'ny vorona rehetra izay nijanona tao an-trano ary nahita sakafo tao. Saingy mila tranom-borona akory ny natiora?
Trano vorona namboarina ho firavaka ho an'ny zaridaina ririnina
Ny skeptika aza dia mihevitra azy ireo ho mampidi-doza satria mino izy ireo fa ireo fanampiana ara-tsakafo ho an'ny vorona ireo dia hanohitra ny fisafidianana voajanahary ny biby taloha sy malemy amin'ny ririnina mangatsiaka. Ho fanampin'izany, ireo toerana fisakafoanana ireo dia hampitombo ny isan'ny vorona miteraka amin'ny lohataona, satria velona ny malemy, ary noho izany ireo vorona mpifindra monina dia tsy mahita toerana honenana intsony.
Manaova mpamahana vorona anao - © Oskar / Adobe Stock
Mpihinana vorona namboarin-tena noho izany dia tsilo eo anilan'ny mpitsikera. Nefa marina ve izany?
Ny zana-borona voaorina irery dia manan-jo hanana!
Raha manamboatra mpamorona vorona ianao ary mametraka azy ao anaty zaridaina, dia tsy hanelingelina ny natiora. Rehefa dinihina tokoa, ny toeram-ponenan'ireo vorona dia miha simba hatrany hatrany.
Raha ny tokony ho izy, amin'ny fahavaratra, ny trano kely dia azo avadika haingana ho toerana manondraka ary afaka mijanona ao. Ny mpanam-borona namboarin-tena dia tokony hatao amin'ny hazo sahaza azy koa (ohatra spruce) ary mazava ho azy nopetahana sy nofantsihina niaraka tamin'izay ny vorona mba tsy handratra ny tenany.
Ary tandremo ny saka ny mpiara-monina! Mazava ho azy fa tsy tokony hanana fotoana hisamborana ireo biby izy.
Raha manamboatra boatin-akany sy tranom-borona ianao, dia tokony hikarakara menaka rongony solon'ny solika fa tsy simika. Izy io koa dia manohitra ny famelezana bobongolo, nefa tsy manimba ny fahasalaman'ny biby. Ny fandokoana ny trano dia tsy olana velively, fa azafady mba alao antoka fa tsy mampidi-doza ny lokony.
Misy soso-kevitra lehibe amin'ny Internet momba ny famolavolana ny mpamorona vorona anao. Ny iray manangana trano mimanda ho an'ny sakaizany volom-borona, ny iray kosa lapa, ary ny iray kosa tia azy kilasika sy tsotra.
Tsy miraharaha ireo vorona, ny tena zava-dehibe dia ny mahita sakafo ampy ao anatiny rehefa misy lanezy. Araka ny voalaza etsy ambony, ny mpanafika ny vorona dia azo amboarina amin'ny hazo spruce. Mety koa ny hazo beech sy cemara. Tokony hanao tsy misy plywood sy chipboard ao amin'ny tranom-borona voaorina ianao.
Ny mpamahana vorona namboamboarina dia ampiasaina betsaka amin'ny ririnina ary fahitalavitra faharoa ho an'ny fianakaviana maro. Eto ny ankizy dia afaka mianatra zavatra betsaka momba ny karazam-borona tsirairay: izay mijanona ao an-trano, inona ny vorona mpifindra monina? Inona no mahasamihafa ny blackbird lahy amin'ny vavy; ary ahoana no ahaizanao mamantatra tite lehibe - ary misy karazam-biby hafa?
Iza no tia mihinana inona ary ambonin'izany rehetra izany, iza no tonga amin'ny ora firy? Misy vorona mandroaka ny hafa? Ilay mpamahana vorona namboarin-tena dia tsy lasa toerana fisakafoanana fotsiny, fa mandray anjara betsaka amin'ny fahafinaretan'ny mpianakavy, fialamboly ary fianarana. Amin'ny farany, io dia manamboatra lalana ho an'ny fitsaboana am-panajana ny biby sy ny natiora. Ary tsy afaka mianatra an'izany aloha ny ankizy ankehitriny!
Pejy fandokoana ankizy manangana trano mimanda fasika
Ny kalandrie Adventista Tinker anao manokana